Prọfesọ Geoffrey Lipman nakweere na Tourlọ Nzukọ Ndị Nlegharị Anya nke Mba Nile
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Prọfesọ Geoffrey Lipman nakweere na Tourlọ Nzukọ Ndị Nlegharị Anya nke Mba Nile
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
The Tourlọ Nzukọ Alaeze nke Mba Ndị Agadi taa tinye onye nke anọ ya. Prọfesọ Geoffrey Lipman ka e nyere onyinye akara ọla edo nke ihe nchekwa Safer Tourism Seal maka iduzi ya na mmezu ya na ọgba aghara ndị njem ugbu a. A bịa na njem ihu igwe na ihu igwe ihu igwe, Prọfesọ Lipman abụrụla onye ndu na onye ndu na njem na njem njem ụwa ruo oge ụfọdụ.
Njegharị nke ihu igwe abụwo nsogbu maka Prọfesọ Lipman kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a, na COVID -19 akwụsịghị nke a kama ọ mepụtara mmata na ohere ọhụụ. Dabere na Brussels, Belgium, na Malta, ọ na-arụ ọrụ na-agwụ ike. Ahụbeghị Prọfesọ Lipman dịka "Ee Ee" ma weta tebụl ihe dị mkpa.
Prọfesọ Geoffrey Lipman bu ihe eji eme ihe bu ihe okike na onye isi nke greenearth.travel, ntaneti echiche nke uwa nke na akwalite ahihia ndu na njem (njem na njem) na ndi okacha amara na atumatu, ihe ohuru na ego.
Prọfesọ Lipman bụ Adjunct Prọfesọ Victoria University Australia, na-eleta Prọfesọ Hasselt University BE, na-eleta Prọfesọ Oxford Brookes University UK, Onye Nleta Ndị Na-ahụ Maka Njem Nlegharị Anya, George Washington University US, na Onye otu World Council Economic Forum nke Global Agenda Council. Odeela akwukwo / kwue okwu banyere usoro nlegharị anya, nkwado, na ịtọhapụ ndị mmadụ. Na 2012, ọ malitere na Rio + 20 Earth Summit ọhụrụ compendium nke ndu echiche site 50 nke kacha mma eche echiche n'ime na n'èzí mpaghara - "Green Growth & Travelism; Akwụkwọ ozi ndị isi ”.
Lipman bụ Executive Director IATA, onye isi ala mbụ WTTC, yana onye na-ahụ maka Secretary General na UNWTO. O jeela ozi na ngalaba gọọmentị na nke onwe na Africa, Europe, Middle East & Canada, yana EU EU Commissions na Airline Liberalization yana na njem ndị njem. Ọ bụ onyeisi oche nke Njikọ Mba Nile nke Ndị Njem Nlegharị Anya (ICTP)
Lipman na-eduga ugbu a SUNx - Ike Universal Network - usoro ohuru maka njem nleta na ndi nwere oke ochichi iji wulite nguzo ihu igwe dika ebe ebumnuche nke nkwekọrịta Paris site na Njem Enyi na Enyi. Ọ bụ ụlọ ọrụ Green Growth & Travelism Institute (GGTI) nke ndị Belgium anaghị enweta uru na-achịkwa ya.
Juergen Steinmetz, onye nchoputa nke rebuidling.travel kwuru, sị: “Amaara m Geoffrey ruo ihe dị ka afọ 20. A na-akwanyere Geoffrey ùgwù na netwọkụ kachasị ịtụnanya nke ndị isi njem nlegharị anya gburugburu ụwa. Ọchịchọ ya maka mgbanwe ihu igwe na ịpụta na nsogbu a ga-eme nnukwu ọdịiche maka ụwa anyị. Ihe nrita a kwesiri nke ọma. ”
Lipman kwuru: “Obi dị m ụtọ ịbụ akụkụ nke obodo a: ọ bụ ezie na o siri ike ịnwe - ebe m mụtara ihe karịrị ọrụ 3 obi ụtọ dị ka Exec Director na IATA, Onye isi ala WTTC na Ass. Nkeji Gen UNWTO na ụzọ kachasị mma maka nchekwa na nchekwa bụ ige ezigbo ndị ọkachamara ntị ma nyere ngalaba ahụ aka ịgafe na-aga n'ihu.
Enwere m ihu ọma inwe dịka enyi na onye ndụmọdụ maka afọ 25 dị egwu Maurice Strong bụ onye bụbu onye na-ese ụkpụrụ ụlọ ihe karịrị ọkara narị afọ maka ụwa zuru ụwa ọnụ nke UN Sustainability Framework ably .. Karịsịa SDG's na ebumnuche 2030 ha na Paris Accord na 2050 ya dị adị nkwụsị siri ike.
Nke a bụ ihe kpatara na usoro ikpeazụ nke ndụ ndụ m ji etinye aka na SUNx Malta (Strong Uonye nzuzu Network - ihe nketa maka Maurice) ya na cano njem ihu igwe anyị ~ Carbon dị ala: SDG jikọtara: trajectory Paris 1.5.
Anyị kwenyere na ụlọ ọrụ ọ bụla na oke njem njem na njem nlegharị anya nwere ike ịnapụta 2030 na 2050 dị ka akara ngosi atụmatụ. Anyi abughi nani ikwusa ozi: anyi na enye oru - a diplọma nke njem ihu igwe na ihu igwe maka Ọzụzụ anddị na ndekọ aha nke Ọnọdụ Iche Iche & Nkwado Ebumnuche dịka ntụzịaka ntuziaka. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ Inspire 100,000 Pụrụ Iche Ọnọdụ Ihu Igwe gafee mba UN dum site na 2030.
Enwere m ekele maka enyi m Leslie Vella nke Malta Tourism Authority maka inwe ọhụụ ịkọrọ m njem ikpeazụ m na Olly Wheatcroft. Anyị na-ewere ya maka ụmụ ụmụ anyị. ”
More ozi na Nchekwa njem nleta Akara gaa www.safertourismseal.com
Prọfesọ Geoffrey Lipman, Brussels, Belgium